Toriteny 13 aprily 2014, alahadin'ny sampan-drofia | FJKM Amboniloha
Toriteny 13 aprily 2014
Salamo 116:1-9 / Lioka 19:29-44 / Asan’ny Apostoly 9:36-43
Asan’ny Apostoly 9:36-43
Vehivavy mpianatry ny Tompo, resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra i Tabita. Isan’ny foto-kevitra iraisan’ny mpianatry ny Tompo ny fifanampiana sy ny fanaovana asa soa . Ny asa soa no endrika iray anehoan’izy ireo ny fanompoana an’Andriamanitra.
Inona ary no lesona azontsika tsoahina amin’ity tantaran’i Tabita na i Dorkasy ity ?
1- Miantso antsika Andriamanitra
Alahadin’ny Dorkasy anio, antsoin’Andriamanitra (indrindra ny vehivavy) hanao inona ary isika ? Ho mpiara-miasa Aminy ? Fa moa tsy vitan’Andriamanitra samirery va ny asany ?
Lesona : Tena vitan’Andriamanitra ny asany saingy ny fanompoana amin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana nomena anao, dia isan’ny mahafaly an’Andriamanitra tokoa, tsy natao hitadiavana tombontsoa manokana ho an’ny tena ireny ; na hanao izay hisongadinana mihoatra noho ny hafa, fa natao indrindra hanasoavana ny mpiara-belona, toa izay nataon’i Tabita eto amin’ity tantara ity.
2- Mihevitra antsika mandrakariva Andriamanitra
Ny fananganan’Andriamanitra amin’ny maty dia tsy voatery hoe amin’ny olona efa tsy miaina intsony, fa misy tokoa ny olona atsangana amin’ny maty na dia mbola velona toa ahy sy ianao izao aza. Vokatry ny fahotana dia tafasaraka amin’Andriamanitra ny olombelona ka manjary manaonao foana, tonga ny olana samihafa ary ireny no mitarika fahafatesam-panahy, tsy afaka hahatsiaro izany fahafatesana izany ny olona iray raha tsy efa nahatsapa fahavelomany tao amin’Andriamanitra.
Lesona : Manoloana ny olana atrehina amin’ny fiainana andavan’andro izay mety hitarika fahafatesanam-panahy dia mampianatra antsika ny Tompo mba hitoetra amin’ny finona ka handohalika, mivavaka ary sahy hiteny amin’ny Anaran’I Jesoa toa an’ Petera hoe “Mitsangàna ho amin’ny fiainana aho ”, tena mitaky finoana izany .
Tsarovy ry Havana, fa izay rehetra miseho amin’ny fiainanao, na olana na fikasàna na faniriana tsy tanteraka dia tena hitan’Andrimanitra avokoa.
Mampianatra antsika tantaran’i Tabita izao fa mandritra ny androm-pahavelomana dia taomina isika mba hanao asa tsara araka ny talenta nomena antsika tsirairay avy. Ataovy ho fanompoana an’Andriamanitra izany mba ho tena mpanompo mahita fitia eo imason’Andriamanitra isika toa an’i Tabita, ka hiseho eo amin’ny fiainanantsika ny voninahitr’Andriamanitra dia hahababo fanahin’olona maro hoa an’I Kristy ny asa tsara ataontsika.
Mamonjy amin’ny fahafatesana ny Tompo : atolory an’I Jesoa izay rehetra olam-piainanao fa Izy hanangana anao ho amin’ny fiainana feno fiadanana.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra . Amen !
RANDRIANARISON Violette, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 16 avril 2014